China Clutch fekitori uye vanotengesa | Qian Iye
Ichi chigadzirwa ibatisisa.
Iyo Dodson Lamborghini clutch, gearset, sump, diff chivharo, uye hafu shaft line-up ndiyo yekupedzisira mashandiro epakeji kune yega yega Lamborghini motorsport anodisa yakagadziridzwa Huracan.
SPORTSMAN'S CLUTCH KUSIMBIRA KUTI SITI R8 / HURACAN
- Yakakwira kuita 8 ndiro yekubatira kuvaka
-Mhando machined billet matengu
- Hunhu kupesana
- Patent kukwesana dhizaini
- Yega yekubatirira itsika ruoko yakavakirwa kune chaiyo tolerances
- Inogona kushandiswa mumugwagwa, dunhu uye dhonza kumhanya
- Patent-ichimirira zvinhu zvakaiswa
- Yakakwira torque inobata chinzvimbo
- Yakaderedzwa clutch dhonza
- Kukwesana kudiki & simbi
- Kukweshera kukuru & simbi
- Dengu diki
- Dengu hombe
Zvekudhonza mujaho uye kumwe kunyorera kwakanyanya, Iyo Dodson Lamborghini clutch inopa inosvika ku850hp simba rekubata mune isingaremi uye compact clutch system. Kushandisa inoyerera hub hub inogadzirawo iyo clutch isingadhuri kuvaka zvakare. Iko kumanikidza kwekumanikidza kwe1100kg kuchiri kugamuchirwa kwekutyaira mumugwagwa, uku uchipa kukurira kukuru kutsvedza mukushandisa kwekudhonza.
Shanduro dzese dzinorerutsa chrome-moly flywheel uye goridhe-anodised billet aluminium clutch chivharo.
Ichi Clutch Masters chigadzirwa inyanzvi uye zvine hungwaru zvakagadzirirwa kuti zvipe yakasimba mukurumari yauri kutsvaga. Iyo kambani haigamuchire kukanganisa painoenda nezvehunhu, saka unogona kuva nechivimbo chakazara kuti chigadzirwa ichi chechipiri kune chimwe. Iyo inogadzirwa kubva kune yekutanga-chiyero zvinhu kuti uve nechokwadi chakatanhamara kutendeseka. Ichi chigadzirwa cheClutch Masters chinopa basa rinoshanda uye risinganetseke kwemakore mazhinji ari mberi zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka yekugutsikana kwako kwekupedzisira.
Pashure: Base Gomo
Zvadaro: Yakakwenenzverwa Seat Post